Dr. Warsame ?Shirka caafimaadka waa maqalnay, waana been in ergo ka tagtay Puntland? (Dhegeyso) – Radio Daljir
Nofeembar 9, 2013 7:23 b 0
Garoowe, November 9, 2013 – Dowladda Puntland ayaa beenisay in xubno ka tirsan maamulka ama wasaaradda caafimaadka ay ka qayb-galeen shirka caafimaadka Soomaaliya, xili shirka lagu sheegay in ay joogaan metelayaal ka socda deeganada Puntland.
Wasiirka caafimaadka ee Puntland Dr. Cali Cabdulaahi warsame waxaa uu sheegay in warkaas yahay been abuur, Dr. Warsame wuxuu xusay in uusan jirin ?xiriir ka dhexeeya wakhtigan Puntland iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
?shirka waan maqalnay, Puntlandna kama qayb-gelin ma tegin qof ka socda Puntland, waa been abuur warka aan ka maqalnay warbaahinta.? Ayuu yiri wasiirka caafimaadka ee Puntland oo la hadlay idaacada radio Daljir.
?Ma jirto dan nooga xiran Muqdisho mana u socono, caafimaadka Soomaaliya waxaa looga hadlaa madal kale oo la yiraahdo Somali Health sector oo Nairobi ah, halkaas oo dhaqaalaha caafimaadka dalka lagu qaybiyo.? Wasiirka ayaa shirka Qaran ee Muqdisho ka socda ku tilmaamay mid aan munaasib ahayn.
Dr. Warsame waxaa uu sheegay in uusan wax xiriir ah ka dhexayn Puntland iyo Soomaaliland, ?ma dhacayso in aan Muqdisho u tagno dannaheena ilaa Soomaalidu heshiiso.?
Ra?isal wasaaraha Soomaaliya mudane Cabdi faarax shirdoon ayaa khamiistii furay shirweyne Qaran oo looga hadlayo caafimaadka Soomaaliya, shirka ayaa waxaa ka qayb-galaya in ka badan 500 ergo ah oo ka kala yimid gudaha iyo dibedda.
Wasaaradda Kalluumaysiga iyo Khayraadka badda ee Puntland ayaa sidaan oo kale dhowaan cabasho uga muujisay xeerka kalluumaysiga Soomaaliya oo baarlamanka federaalka loo qaybiyey isla markaasna lagu suntay in Puntland lagala tashtay.
Wasiirka Kalluumaysiga Eng. Maxamed Faarax Aadan ayaa waraysi uu siiyey radio Daljir ku beeniyey in ay xeerkaas wax ka ogyihiin, Eng. Aadan wuxuu ugu baaqay Baarlamanka in xeerka la celiyo balse doodiisa ayaa bilaabatay welina socota.
Dhegeyso: Wasiirka caafimaadka Dr. Cali Cabdulaahi oo u waramay Jamaal faarax oo daljir ka tirsan